Shina mametaka crata fanamboarana sy orinasa | Lonovae
Vatom-boaloboka legioma dia sobika ampiasaina amin'ny toeram-pivarotana lehibe misy legioma, voankazo ary tsakitsaky. We Lonovae dia manome boaty plastika faran'izay tsara. Ny boaty natolotra dia amboarina miaraka amin'ny fanampian'ny akora matanjaka avo lenta araka ny fenitra iraisam-pirenena. Ny mpanjifa dia afaka mampiasa ity boaty ity avy aminay amin'ny habe, endrika, loko ary refy samy hafa arakaraka ny filany.
Anaran'ny vokatra Crate-01 mamoritra
lafiny 600 * 400 * 110mm
Fonosana 10PCS / CARTON
Anaran'ny vokatra Crate-02
lafiny 600 * 400 * 170mm
Anaran'ny vokatra Crate miolaka-03
lafiny 600 * 400 * 220mm
Anaran'ny vokatra Crate-04
lafiny 600 * 400 * 300mm
Faharetana 1.High: manana fiasa kanto sy mahazaka enta-mavesatra isika. Ny ambany dia manana tsipika matanjaka maro hahazoana antoka fa tsy misy tsindry amin'ny enta-mavesatra.
2. Mavesatra maivana.
3. Vita tsara: manana fanapahana milamina izahay. Izahay dia mampiasa ny fanapahana lasera sy ny totohondry ary ny manety azy indray mandeha. Misy ny fanapahana malefaka ary tsy mila fanjaitra amin'ny hoditra.
4.Fiainana maharitra: Mampiasa ny vigin PP vigin vaovao izahay. Izahay dia mizaha toetra ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fitsapana kalitao SGS ary manome antoka ny kalitao.
5. Fanorenana mafy.
6.We afaka manamboatra Logo ho an'ny mpanjifanay noho ny fepetra takiana.
7.Manana tahiry maro izahay ary mamokatra mandritra ny taona maro handefasana haingana ny entana.
Ho an'ny fitakiana avo lenta, izahay Lonovae dia manana milina fanorohana tsindrona Haitian am-polony, ary mampiasa fiara vato Sino-Korea, sns. Ho an'ny kalitao avo lenta, manana milina famolavolana tsindrona haitianina am-polony ny orinasa ary mampiasa akora manta avo lenta avy any Sino. -Korea Petrochemicals. . Raha te hanompo amin'ny mpivarotra an-trano sy any ivelany dia manana fahaiza-mamatsy matanjaka izahay, miaraka amin'ny fahafaha-manao famokarana isan'andro maherin'ny 10.000 karazana vokatra plastika toy ny harona fiantsenana sy paleta. Ny orinasanay dia mifikitra amin'ny foto-kevitry ny serivisy amin'ny fananganana orinasa amin'ny fahitsiana sy ny fandresena amin'ny kalitao ary manompo ny mpanjifanay amin'ny fo manontolo.
Manana ekipa mpikaroka manara-penitra izahay hamokatra, hamolavola ary hanompo.
Manana fitantanana fitiliana henjana izahay. Manana dingana tsara izahay, toerana fanandramana tsara ary ambaratonga fitantanana mandroso hanome ny entana avo lenta.
Manana refy isan-karazany amin'ny vokatra sy rafitra vaovao izahay, dingana marina.
Teo aloha: Vata an-tsokosoko voankazo
Vata misy legioma